Chii chinoitika kana muhukama hwakagamuchirwa kupfuura unopihwa | Bezzia
Maria Jose Roldan | 06/09/2021 22:35 | Hukama
Zvinowanzo taurwa kuti muhukama hune hutano munhu anopa asingatarisiri chero chinhu kudzoka. Nekudaro, kune vanhu vakashushikana uye vane nguva yakaoma yekucherechedza kuti vanopa sei rudo uye chidakadaka nguva yese kune vaviri uye vasingagamuchire chero chinhu.
Muchinyorwa chinotevera tinokupa mamwe marongero ekuziva kana, chaizvo, iwe unogamuchira zvinopfuura zvaunowanzo kupa mukati mevaviri.
1 Maitiro ekuziva kana iwe uchigamuchira zvinopfuura zvaunopa mukati mevaviri
2 Ndeipi mhedzisiro yekugamuchira uye kusapa mune vaviri
Maitiro ekuziva kana iwe uchigamuchira zvinopfuura zvaunopa mukati mevaviri
Vanhu vazhinji havazive zvizere kuti muhukama hwavo, ivo vari kuramba vachigamuchira kuratidzwa kwerudo uye chidakadaka, Asingadzore chinhu. Kune akatiwandei ezviratidzo zvinogona kuratidza izvi:
Icho chirongwa chinotorwa chete nemumwe wemapato kungave pakuronga zororo kana kana kuita chimwe chinhu chisina basa. Nekufamba kwenguva, chimwe chezvikamu zvevaviri vanoona uye matambudziko anoonekwa. Iwe haugone kubvumira imwe yemapati kuti iratidze kufarira mune zvese uye imwe kuti ive nekuzeza zvekuti inopedzisira ichikuvadza ramangwana rakanaka revaviri.
Zvakajairika kuti nekufamba kwenguva, panoita kumwe kurwisana kana kurwa. Kana izvi zvikaitika, zvakajairika kuti vese mapato maviri vaite zvese zvavanogona kuti vawane imwe nzira yemhinduro inobatsira hukama. Zvakadaro, zvinogona kuitika kuti imwe yemapato anopedzisira ayambuka maoko avo uye anotarisira kuti mumwe wake ndiye anozopedzisa kugadzirisa chinhu. Kupasa hakuna kunaka kune chero hukama kana hutano.
Chero ani ari muhukama anoda kushamiswa nemumwe wake nguva nenguva aine kushamisika kwerudo. Ichi kiyi kana zvasvika pakuchengeta murazvo werudo uchipfuta. Kutarisa makore achifamba uye zvisingatombo gashira zverudo, inomisa hukama kubva kufambira mberi uye inomira munzira ine njodzi. Iwe haufanire kugadzikana uye uve nerumwe rudzi rweruzivo nguva nenguva runobatsira vaviri vacho kuziva kuti rudo rwenyu.
Ndeipi mhedzisiro yekugamuchira uye kusapa mune vaviri
Kune akateedzana emhedzisiro mune yekugamuchira uye kusapa chero chinhu mune vaviri:
Inguva yenguva imwe chikamu chevaviri chisati chapera kuneta uye kurwa nemakakatanwa anotanga. Simba rine muganho uye kana zvikasvika, hukama hunogona kusvika kumagumo.
Kupedza nguva yese uye usingape chero chero rudo kunogona kukanganisa mamiriro emanzwiro evaviri. Kuvimba nekuzviremekedza zviri pasi, izvo zvisina kunaka kuti vaviri vacho vaenderere mberi.
Pakupedzisira, hazvina basa kuve nehukama hwausinga gashira chinhu kunyangwe uchipa zvese kune mumwe munhu. Vaviri vacho havasi makwikwi, asi panofanirwa kuve nekubatanidzwa kwemapato kuitira kuti zvese zvifambe zvakanaka uye hukama ihwohwo hwakanaka sezvinobvira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Chii chinoitika kana zvakawanda zvakagamuchirwa muhukama kupfuura zvinopihwa
Makara uye zvakakosha zvinhu zvekugadzira yekumashopu windows windows